Tag: ụbọchị na ndụ | Martech Zone
Tag: ụbọchị na ndụ
Ka anyị meghee site n’ikwu na m nwere ọrụ onye a n’okpuru, heh. Dịka onye na-azụ ahịa dijitalụ, anyị na-agagharị site na ndị ahịa anyị niile kwa izu, na-enyocha arụmọrụ ha, na-eme mgbanwe, nyocha, na-eme atụmatụ ma na-eme mkpọsa ọtụtụ ọwa. Anyị na-eji ngwaọrụ karịa ihe infographic a na - akọwa - site na nkwukọrịta, mbipụta, na ngwa ọrụ yana nyocha. IMO, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na mpaghara kachasị mma ha. Ọ bụghị ihe ndabara na